Xog: Dood ka taagan lacag ka maqan qasnadda dowladda hoose ee Muqdisho iyo baaritaan ku socda | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Xog: Dood ka taagan lacag ka maqan qasnadda dowladda hoose ee Muqdisho...
Xog: Dood ka taagan lacag ka maqan qasnadda dowladda hoose ee Muqdisho iyo baaritaan ku socda
Waxaa dood badan ka taagan tahay oo baaritaan lagu hayaa lacag oo ka maqan gobolka Banaadir, taasi oo badankeed baxday intii u dhaxeysa weerarkii ka dhacay xarunta gobolka iyo aaskii allaha u naxariistee Guddoomiyihii gobalka Banaadir ahaana duqii Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow.
Sida ay ogaatay warbaahint qaarkeed xisaab celin ay sameeyeen guddigii u xilsaarnaa aaska daryeelka iyo aaska dadkii wax ku noqday weerarka aqalka dowladda Hoose, ayaa lagu sheegay in lacag dhan hal Milyan oo dollar ay baxday muddo ka yar hal bil.
Lacagtaas ayaa badankeed la sheegay in lagu qarash gareeyay aaska Marxuum Yariisow iyo daryeelkiisaba, waxaana sidoo kale ku jira dadkii kale ee dhaawacyada ahaa.
Lacagtaan oo laga bixiyay qasnadda dowladda Hoose ayaa lagu sheegay insy ku baxday daryeelka marxuum Yariisow intii uu dhaawaca ahaa iyo aaska geeridiisa. Sidoo kale masuuliyiintii kale geeriyootay iyo kuwii dhaawacmay ayaa la sheegay in ay lacagtaas qayb ka aheyd meelihii ay ku baxday.
Waxaa sidoo kale jirta lacag badan oo la sheegay in lagu bixiyey dayac-tir iyo qurxinta xarunta gobolka, balse aysan jirin howl-muuqata oo ay ku bixi karto lacag tobanaan kun oo dollar ah.
Lacagta ugu badan oo dhan 700,000 oo dollar ayaa la sheegay inay baxday 24-kii July oo ahaa maalinkii qaraxa uu dhacay ilaa 8-dii August.
Xogtaan ayaa waxaa laga helay Xafiiska Maaliyadda ee Gobalka Banaadir kadib markii Cumar Filish, uu ka dalbaday ku simihii Gobalka Banaadir Ibraahim Dheere, in uu soo gudbiyo lacagtii ka baxday Gobalka, dadkii la shaqaaleysiiyay iyo kuwii la dalacsiiyay intii uu kusimaha ahaa.
warbaahinta ayaa la hadashay xubno sare oo ka tirsan maamulka Gobalka kuwaas oo noo xaqiijiyay in arintaan ay muran abuurtay iyadoo la sheegay in loo gudbiyay Xafiiska ra’iisul wasaare Kheyre iyo kan hanti-dhowraha qaranka, oo iminka baaritaan ku haya.
Cumar Filish, ayaa yiri “waxaan go’aansaday in aan hanti-dhowrka iyo madaxda qaranka la wadaago tirada, shaqaalaha iyo hantida gobalka aan ugu imid ka hor inta aan shaqo gelin, wixii markaas ka dambeeyo aan qaato mas’uuliyadda wixii dhaca” sida aan ka soo xiganay mas’uuliyiin aad ugu dhow Cumar Filish.
warku ma hubto in dhamaan Xubnaha Guddigii loo xil saaray musiibadii ka dhacday xarunta dowladda Hoose ay raali ku yihiin Warbixin laga gubiyay Xafiiska Maaliyadda ee Gobalka Banaadir, waxaase muuqata in halkaas lagu lumiyay lacago boqolaal kun oo dollar ah.
Sidoo kale, warbixinta ayaa ogaatay in diyaaradda lagu qaaday sidoo kalane lagu soo celiyay maydka Yariisow iyo dadkii la socday ay aheyd lacag la’aan oo ay ku deeqday Dowladda Qatar, waxaana sababta lagu sheegay in aan la kireynin diyaarad Milateri, sidoo kalane aan Soomaaliya laga kireyn doonin caawimaadda deg degga ah ee Qatar.